Galmudug oo Shaacisay in ay soo afjartay Dagaalkii Al-Shabaab iyo Madaxweyne Guuleed oo maanta tagaya … – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Galmudug oo Shaacisay in ay soo afjartay Dagaalkii Al-Shabaab iyo Madaxweyne Guuleed oo maanta tagaya …
Maamulka Galmudug ayaa shaciyay in ay soo afjareen dagaalkii ka socday Bariga Gobolka Mudug ay kula jireen dagaalyahano katirsan Xarakada Al-Shabaab oo kasoo firxaday dhinaca Maamulka Puntland.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug Maxamuud Aadan Masagaway, ayaa shaaciyay in ciidamada Galmudug ay soo afjareen dagaalkii ay Al-Shabaab kula jireen ee kasocday deegaano hoos taga maamulkooda, waxa uuna tilmaamay in dagaalkaasi ay guulo ka gaareen.
Masagaway, ayaa sheegay in dagaal socday afar maalmood ay la galeen dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ay ku dileen in ka badan 100-dagaalyahan sidoo kale ay maxaabiis ahaan u qabteen 110-maxbuus oo kale.
Dhinaca kale Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed , ayaa maanta lagu wadaa in uu gaaro soona kormeero deegaanadii ay ka dhaceen dagaaladii u dhaxeeyay dagaalyahanada Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Galmudug.
Deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen uuna booqanayo Madaxweynaha Galmudug, waxaa kamid ah deegaanada Afbarwaaqo dinooda iyo Towfiiq, deegaanadan waxaa hada ku sugan gacantana ku haya ciidamo katirsan maamulka Galmudug.
Al-Shabaab ayaa qasaaro xoogan waxa ay kasoo garaeen dagaaladii ay la galeen Ciidamada Puntland iyo kuwa Galmudug, waxaana dagaaladaasi la sheegay in lagu dilay dagalayahano aad u badan sidoo kale maxaabiis ahaan looga qabtay in ka badan 100-dagaalyahan, kuwaa oo ku kala xiran magaalooyinka Garawe iyo Gaalkacyo.